डेेंगु संक्रमण रोक्न बुटवलमा विशेष अभियान सुरु – Everest Dainik – News from Nepal
डेेंगु संक्रमण रोक्न बुटवलमा विशेष अभियान सुरु
डेगु नियन्त्रणमा के गर्दै छ प्रकोप व्यवस्थापन समिति ?
बुटवल, कात्तिक २४ । बुटवलमा डेेंगुका बिरामी ह्वात्तै बढेपछि डेंगुको संक्रमणविरुद्ध विशेष अभियान संञ्चालन गरिएको छ । विहिवार बिहानसम्म ५ सय ३५ जनामा डेगु संक्रमण भएको पाइएको भन्दै अञ्चल अस्पताल बुटवलका मेडिकल रेर्कड अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले यसविरुद्धको अभियानलाई तिव्रता दिएको बताए ।
उनका अनुसार, बिहिवारबाट अस्पतालमा औषधि टिट्ने काम थालिएको छ भने टोल टोल मा डे.गु सार्ने लामखुट्टेको खोज ीगर्ने र नष्ट गर्ने अभियान लाई तीव्रता दिइएको छ । लामखुट्टेको बासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान विगत दिनदेखि सञ्चालनमा रहेको भएपनि अझ बढी प्रभावकारी बनाइएको छ । डेगु नियन्त्रणका लागि विगतमा थालिएका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी वनाउनेदेखि थप उपायहरु खोजि गर्दै अभियानलाई तीव्रता दिन थालिएको छ ।
रेग्मीका अनुसार, सक्रमितहरु विभिन्न जिल्लाका रहेका भएपनि ८० प्रतिशत रुपन्देहीका छन् । त्यसमा पनि ७५ प्रतिशत बुटवलकै बासिन्दा छन् । बुटवलबाट मंगलवार ३७ वटा नमुना परिक्षणका लागि केन्द्रीय जनस्वस्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । रुपन्देहीका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर तथा स्वस्थ्यकर्मी गरी १२ जनामा डेगुको स.क्रमण भएको रेग्मीले बताए ।
पछिल्ला दिनहरुमा दिनप्रतिदिन संक्रमण बढेपछि केही दिन अगाडी जनस्वथ्यको केन्द्रको टोलि पनि बुटवलमा आएर अध्यान थालेको थियो । जनस्थ्य अधिकृतहरुको टोलि बुटवलमा आइपुगेको हो । यसै क्रममा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा बुधवार स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलि समेत आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रेग्मीसहितको टोलिले अस्पतालमा छलफल समेत गरेको थियो ।
डाक्टर रेग्मीले डेंगुको प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रुपले लागेको बताईन् । चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले बुटवल क्षेत्रमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि पहिलो जनता आफै सचेत हुनुपर्ने र सरकार, सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्यमा सचेतना जगाउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डन डा. कृष्ण खनाल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख केयरसिंह गोदारलगायतले डेगु संक्रमणको अवस्था र नियन्त्रणका प्रयासबारेमा चर्चा गरेका थिए ।
डेगुको प्रकोप बढेपछि स्थानिय तहमा डेगु नियन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रकोप ब्यवस्थापन समितिले पनि सक्रियता बढाएको छ । समितिले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने निणय गरेको छ । रेग्मीका अनुसार, प्रहरी, स्वस्थयकर्मी, जनप्रतिनिधि, महिला स्वयमसेविकासहितको टोलि ब्यापक परिचालन गर्ने निणर्य भएको थियो र सोही अनुसार कार्यक्रम भइरहेका छन ।
त्यस्तै डेगु नियन्त्रणका लागि टायरहरु बढी चुनौतीका रुपमा पाइएको भन्दै टायरको ब्यवस्थापनमा लाग्ने पनि निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा झुल वितरणका बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
बैठकमा अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर कृष्ण खनाल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमा आचार्य लगायतले डेगु नियन्त्रणका बाारेमा चर्चा गरेका थिए । यस आर्थिक वर्षको साउन यता असोज १५ सम्ममा जम्मा २५ जनामा संक्रमण भएको पाइएकोमा पछिल्लो दिनमा संक्रमण ह्वात्तै बढ्दो रहेको छ ।